Mas’uul Israel oo miisaan culus leh ayaa qaraxii Beirut ku tilmaay arrin farxad iyo soo dhaweyn mudan ‘warbixin’ | XORRIYA NEWS
Home Caalamka Mas’uul Israel oo miisaan culus leh ayaa qaraxii Beirut ku tilmaay arrin...
Mas’uul Israel oo miisaan culus leh ayaa qaraxii Beirut ku tilmaay arrin farxad iyo soo dhaweyn mudan ‘warbixin’
Moshe Feiglin oo ah xubin hore oo baarlamaanka Israel ka tirsanaa sidoo kalana ka tirsan xisbiga talada hayo ee Likudka kaasoona horay Benjamin Netanyahu tartan dhanka Xizbiga ula soo galay ayaa akoonkiisa gaarka ah kusoo qoray; “Waxaa noo banaan inaan ku faraxno in qaraxani uu ka dhacay Beyruut oo uusan ka dhicin Talabiib”.
Sidoo kale Post kale oo uu soo dhigay isla bartiisa bulshada ayuu markale kusoo qoray; “Ciida jaceylka Yahuuda darteed waxaan helnay bandhig dab ah oo aad u cajiib ah kaasoo ka dhacay Dekeda Beyruut, ma waxay idinla tahay inuu ahaa bakhaar wax lagu keydiyo uun? Kuma eydnaan baraarugin miyaa in jaxiimadaas ay macquul aheyd iney anaga nagu soo dagato oo sidii gantaalada noo garaacdo”.
Intaas kuma ekaanine markale ayuu hadalkiisa ku celiyay asigoo wareysi siinaayay idaacada maxliga ee gudaha Israel laga leeyahay ee 103 asigoona yiri; “Kaba soo qaad qaraxaasi waxaa sababay gantaal ku dhacay goobta sidaas owgeed marwalba waa wax wanaagsan inuu iyaga (Reer Lubnaan) ku qarxay anagana dhamaanteen waxaa noo banaan ugu yaraan inaan ku faraxno, waayo waxa qarxay waa Dekedda Beyruut ee ma ahan Talaabiib”.
Qaraxa Beyruut ka dhacay ayaa sidoo kale wuxuu imaanayaa kadib mudo labo todobaad markii ay kasoo wareegatay xiisad culus oo ka dhalatay xuduuda u dhaxeyso Lubnaan iyo Israel ayadoona Israel ay heegan buuxa galisay dhammaan ciidankeeda gaar ahaan kuwa xuduudaasi ku sugnaa ayagoona doonayay iney kahor tagaan talaabo walba oo ay qaadaan ururka Xizbullaah kaasoo awood xoogan kuleh Lubnaan.
Sababta xiisadaan dhalisay ayaa waxay aheyd kadib markii duqeyn lagu dilay mid kamid ah saraakiisha ururka Xizbullaah kaasoo lagu dilay asigoo ku sugan gudaha Syria waxaana la aaminsanyahay iney ka dambeeysay Israel sidaas owgeed ayay Israel ciidankeeda heegan u galisay si ay uga hor tagaan talaabo walba oo ay doonto iney Xizbullaah qaado kaasoo ay ugu aargudeyso masuulka laga dilay.